Sales Drive | Standard Of Future Co., Ltd. ﻿
28.8.2019, Full time , Food & Beverages / Catering
Company: Standard Of Future Co., Ltd.
Our company is canning company from myanmar. Company name is standard of future co.,ltd. Our Company is the one founded
with skilled employees and has been producing
and distributing foodstuff with modern machines
and equipments packing neat and tidy.Our company is canning company from myanmar. Company name is standard of future co.,ltd. Our Company is the one founded
and equipments packing neat and tidy.
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၃ နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်း အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ရှိရမည်။
Work location အမှတ် (၁၁၆) ၊ဧရာလမ်း၊စက်မှုဇုံ(၅) ၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
24 Days, Part time , Food & Beverages / Catering
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
•	လူမှု ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ သွက်လက်ချက်ချာ ပြီးအလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
•	ရေရှည်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
73 Days, Part time , Food & Beverages / Catering
•	သင်ယူလိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
81 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
Sales Drive Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Standard Of Future Co., Ltd. Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Sales Drive Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Yangon (Rangoon) 453 Days